Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd - Myanmar Real Estate, Myanmar Real Estate Website, Myanmar Property Portal, Property for sale/rent| ShweProperty
09 262200192 , 09 456052097, Website
About Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd
Our AM Construction has been founded since 2002 and new company was named as Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd in 2010. Since 2002, we have completedalot of housing projects and infrastructure development of Department of Human Settlement & Housing Development under Ministry of Construction. Moreover, we are developing high-rise buildings incorporated with Yangon City Development Committee and also with private land owner. Today, our company becomes one of the successful real estate developer through the customer’s trust and our employee’s expertise and efforts.
The founder of our company has beenaproject director at TOSTA group company since 1994.
He established his own company called AM Construction in 2002. AM stands for the name of founder, Aung Min. The name of the company was changed to AMPS (Aung Myin Pyae Sone) Company Ltd in 2010.
Since 2002, AM construction has completedalot of projects such as schools, markets, two-storey buildings,6storey buildings, road and drain infrastructure development belongs to Department of Human Settlement and Housing Development under Ministry of Construction. Moreover, we have done the renovation of Myanmar historical buildings without changing the handiwork.
We have successfully completed the co-construction of apartments with private landowners, houses and apartments construction with PAE system and decoration projects.
Due to construction with standard and specification of YCDC (Yangon City Development committe), trust and satisfaction of the customers and with exquisivly new building designs. Our AM Construction (Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd) Storys thrivingly in the market for more than ten years…
Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd ၏ စီမံကိန်းအသစ်များ
Yay Kyaw Complex
Advertised by Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd
Listed on 24 June 2016
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး4,153
Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd | condo အသေးစိတ်ကြည့်ရန်
Advertiser : Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd
09 262200192 , 09 456052097
50 Street Condominium ကွန်ဒို
50 Street Condominium ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး2,061
50 Street Condominium ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
9 Mile Avenue
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,762
Aung Chan Thar Condominium ကွန်ဒို
Aung Chan Thar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,602
Aung Chan Thar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Khine Shwe Yee Residence ကွန်ဒို
Khine Shwe Yee Residence လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,364
Khine Shwe Yee Residence လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Malar Myaing Residence ကွန်ဒို
Malar Myaing Residence ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,161
Marlar Myaing Residence ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Min Ye Kyaw Swar Condominium ကွန်ဒို
Min Ye Kyaw Swar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,144
Min Ye Kyaw Swar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Min Ye Kyaw Swar Residence
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ6း55
Thit Sar Yeik Thar Condominium ကွန်ဒို
Thit Sar Yeik Thar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး1,194
Thit Sar Yeik Thar Condominium ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Treasure Residence ကွန်ဒို
Treasure Residence ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး921
Treasure Residence ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Aung Myin Pyae Sone Co.,Ltd ၏ နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေများ
ငှားရန် - Moe Kaung Condo (101) အားငှားရန်
Listed on 28 July 2016
Moe Kaung Condo (101) အားငှားရန်
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	2,000 USD
ရောင်းရန် - Unit E
ဧရိယာ : 2324 sqft
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရောင်းရန် - Unit D
ဧရိယာ : 2114 sqft
ရောင်းရန် - Unit C
ရောင်းရန် - Unit B
ဧရိယာ : 1529 sqft
ရောင်းရန် - Unit A
ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရောင်းရန် - Unit B ကွန်ဒို
Unit B ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Unit B ဗိုလ်တထောင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - Penthouse (2)
ဧရိယာ : 1645 sqft
မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရောင်းရန် - Penthouse (2) ကွန်ဒို
ဧရိယာ : 1107 sqft
Penthouse (2) ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Penthouse (2) ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - Type (c)
ဧရိယာ : 1273 sqft
လှိုင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
ရောင်းရန် - Unit (3)
ဧရိယာ : 1573 sqft
ရောင်းရန် - Unit (2)
ဧရိယာ : 1596 sqft
ရောင်းရန် - Unit (1) ကွန်ဒို
ဧရိယာ : 1396 sqft
Unit (1) ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Unit (1) ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် - Ground Floor (right)
ဧရိယာ : 2864 sqft
Ground Floor (right)
ရောင်းရန် - Ground floor (Left)
Ground floor (Left)
ရောင်းရန် - Penthouse ကွန်ဒို
Penthouse ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Penthouse ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရောင်းရန် -7floor ကွန်ဒို
ဧရိယာ : 2016 sqft
7 floor ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
7 floor ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဧရိယာ : 1236 sqft
ရောင်းရန် - Room (102) ကွန်ဒို
ဧရိယာ : 1191 sqft
Room (102) ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	Ask For Price
Room (102) ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး